Not naghị enwe mmekọahụ, ugbu a gịnị? | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 20, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 19, 2012 Chris Lucas
O nweburu mgbe mmadụ gwara anyị na anyị, ma ọ bụ nke anyị ụdị ngwa ụlọ, abụghị “sexy”. N'ụzọ ụfọdụ echere m na onye ahụ ziri ezi. Msdị, site n'onwe ha abụghị sexy, mana nye ndị na-eji ha ma dabere na ha iji kpokọta data, ha bụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị sexy, mara mma dị njọ.
Yabụ kedu ka gị, onye nwe azụmaahịa, ahịa, wdg, nke nwere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke na-abụghị “agụụ mmekọahụ” na-eme ya “agụụ mmekọahụ”? Ndị a bụ ụzọ ole na ole.
Gwa ndị ahịa gị akụkọ: Ohere inweta bụ na ị nwere ụlọ ọrụ ụfọdụ na-atọ ụtọ iji ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa gị. Mepụta ọmụmụ ihe. Kwe ka ndị ọbịa ọbịa tinye na blọọgụ gị, mee ha mkparịta ụka vidiyo na ha wee tinye ha na netwọkụ mmekọrịta gị. Gakwuru ndị na-ede blọgụ na oghere gị na akụkọ ha, ihe ịga nke ọma ha. Site n'ilekwasị anya na ngwaahịa gị dị jụụ na nke ọhụụ ị na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma mepee ụzọ ọhụụ maka ndị mmadụ ikwu ma ọ bụ dee banyere gị.
Mepee Ulo: Nwere teknụzụ na-atọ ụtọ n'ezie na-anya azụmaahịa gị? You mepụtara usoro pụrụ iche iji nyere aka rụọ ọrụ azụmahịa gị? Ohere bụ na azụmahịa gị nwere ihe pụrụ iche nke na-akpali ya (ma ọ bụ na ị gaghị enwe ihe ịga nke ọma). Gosipụta akụkụ pụrụ iche nke azụmahịa gị ma nye ndị mmadụ peek n'azụ ákwà mgbochi ahụ. O yikarịrị ka nke a ọ ga - abụ ihe ndị ahịa ma ọ bụ ndị otu akụkọ ga - atọ ụtọ.
Mee Ka Ndị Ahịa Gị Binye dinglọ Gị: Nke a dịtụ iche na nke mbụ. Mma nke netwọk mmekọrịta bụ na ọ na-enye ndị ahịa gị ohere ikwu maka gị. NaMpempe akwụkwọ anyị na-enyocha ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere anyị na Twitter. Kama nanị idebe ihe niile ndị ahụ dị mma nye anyị onwe anyị ka anyị kere a Ugboro abụọ nke Maara Aha Anyị na-ebipụta ma hazie tweets ndị dị mma ma tinye ha na paseeji nke ọfịs anyị. Anyị weghachite ha ma tinye ụfọdụ tweets site na mgbidi na ibe Facebook na blog anyị. Nke a mere ka ndị mmadụ na-ekwu maka anyị ọzọ wee rata ụfọdụ ndị dere ederede izizi iji degharịa tweets anyị. Ọ na -emepụta obi ụtọ maka ika gị na ngwaahịa gị n'ihi na ọ na-abịa site n'aka ezigbo ndị ọrụ nke ọrụ gị. Ọ na-eme ka ndị ahịa gị na-ekwu okwu banyere gị, na-agwa ndị enyi ha otu esi “sexy” ị bụ na ihe kpatara ha ji amasị gị.
Naanị n'ihi na ịnweghị gadịest gadget ma ọ bụ ngwa mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta kachasị ewu ewu na ịntanetị apụtaghị na azụmahịa gị abụghị ihe na-atọ ụtọ. Gwuo ala karie n’elu ala ma hụ ihe ga-eme ka ndị mmadụ kwuo okwu. Ohere inweta bụ na ị gaghị enwe igwu miri emi.
Tags: ahịa akụkọmpempe akwụkwọakụkọ
Nov 20, 2009 na 6:49 PM
Echere m na 'Ọ bụghị Sexy' bụ ihe dị baajị nke nsọpụrụ ebe a na Indiana. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a na-eme ngwa na-adịghị oke sexy… mana ha na-arụ ọrụ. Ha nwere nchekwa, ha na-eto, ha na-eme ihe ndị ahịa chọrọ ka ha mee. Sexy dị ukwuu mgbe ị na-achọ ụbọchị, mana nke a bụ azụmahịa!
Nov 20, 2009 na 6:23 PM
I nwekwara ike leverage obi uto nke onye na-ahụ n'ezie "mmekọahụ" nke ihe ị na-eme. Nke ahụ nwere ike ịbụ onye ahịa, onye ọrụ, onye ọlụlụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ onye ọzọ kpamkpam.
Enwere m onye nkụzi calculus bụ onye ekwupụtara n'ụzọ doro anya banyere otu mgbakọ na mwepụ. Ọ ga-etinye nha eserese na eserese n’elu tebụl ahụ, ọ ga-abụkwa na ọ ga-eji ọ joyụ kọwaa na ọ mara mma. Ọ nwere ọchị ọchị nwatakịrị n'ụtụtụ ekeresimesi. Ọ bụrụ na gị na ya nọ n’ime ụlọ, ị nweghị ike ịlele mana hụ ụfọdụ ọmarịcha mmekọrịta dị n’etiti nọmba ahụ. Asnụ ọkụ n'obi ya na-efe efe. O mere calculus sexy.
Nov 20, 2009 na 6:51 PM
Clay ezi ihe na ekwenyere m. Obi ụtọ, agụụ, mmadụ nwere maka ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike bụrụ leveVE. Agbanyeghị, ejighi m n'aka na m nwere ike ịhụ mmekọahụ na ịkọ nkọ!